Google Docs ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ Ebook ကိုဘယ်လိုဒီဇိုင်းရေး၊ ရေး၊ Martech Zone
အကယ်၍ သင်ဟာ ebook တစ်ခုရေးသားခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလမ်းကိုလျှောက်သွားလျှင် EPUB ဖိုင်အမျိုးအစားများ၊ စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဖြန့်ဝေမှုတွေဟာစိတ်ပျက်အားလျော့စရာမဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ebook ကို Google Play Books, Kindle နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များပေါ်သို့ရောက်အောင်ကူညီပေးမည့် ebook ဖြေရှင်းချက်များစွာထွက်ပေါ်လာသည်။
Ebook များသည်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏အခွင့်အာဏာကိုနေရာတွင်နေရာချထားရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ebooks များသည်ရိုးရှင်းသော whitepaper သို့မဟုတ် infographic ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ထက်ပိုမိုသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ebook တစ်ခုရေးသားခြင်းသည် Google, Amazon နှင့် Apple တို့၏ eBook ဖြန့်ချိရေးလမ်းကြောင်းများမှပရိသတ်အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ပေးသည်။
သင်၏လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများရှာဖွေခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ebooks များကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများစွာရှိသည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များရှိနှင့်ပြီလော သင်၌ကောင်းမွန်သောနယ်ပယ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုရှိပြီးအခြားမည်သူမျှမကြေညာသေးသောအကြောင်းအရာကိုသင်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့သင်ဟာ ebook ဒီဇိုင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုငှားရမ်းစရာမလိုပါ။ Google အလုပ်ခွင် သင်၏ ebook ကိုအဓိကဖြန့်ဝေသောအရင်းအမြစ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုထုတ်ဝေရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များကိုဒီဇိုင်းရေး၊ ရေး၊ တင်ပို့ပါ။
သင့်ရဲ့ Ebook ထုတ်ဝေဖို့ခြေလှမ်းများ
အခြားစာအုပ်များကဲ့သို့ ebook ရေးရန်နည်းဗျူဟာတွင်သိသာသောခြားနားချက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မယုံပါ။ ခြေလှမ်းများသည်တူညီပါသည်။ Corporate ebook များသည်ပိုမိုတိုတောင်း၊ ပို၍ ပစ်မှတ်ထားနိုင်ပြီး၊ သင်၏ပုံမှန်ဝတ္ထုသို့မဟုတ်အခြားစာအုပ်ထက်တိကျသောရည်မှန်းချက်ကိုပေးနိုင်သည်။ သင်၏ဒီဇိုင်း၊ အကြောင်းအရာကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သင်၏စာဖတ်သူကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်စွမ်းကိုအာရုံစိုက်ချင်သည်။
စာအုပ်ကိုစီစဉ်ပါ - စာဖတ်သူကိုအကြောင်းအရာမှတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်ပေးရန်အဓိကအကြောင်းအရာများနှင့်ခေါင်းစဉ်ငယ်များကိုသဘာဝကျကျစီစဉ်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါငါးအရိုးပုံဆွဲအားဖြင့်ငါ့စာအုပ်နှင့်အတူလုပ်ခဲ့တယ်။
သင်၏အရေးအသားကိုစီစဉ်ပါ - တသမတ်တည်းသောပုဒ်မခွဲ၊ စကားလုံးနှင့်ရှုထောင့် (ပထမ၊ ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်) ။
သင့်မူကြမ်းကိုရေးပါ - သင်၏ပထမဆုံးစာအုပ်မူကြမ်းကိုမည်သို့ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်မည်ကိုအချိန်နှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားပါ။
သင်၏သဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းကိုစစ်ဆေးပါ - တစ်ခုတည်းသော ebook တစ်ခုမဖြန့်ခင်သို့မဟုတ်မထုတ်ဝေမီ၊ ကောင်းမွန်သောအယ်ဒီတာသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ Grammarly မည်သည့်စာလုံးပေါင်းသို့မဟုတ်သဒ္ဒါအမှားများကိုဖော်ထုတ်ပြင်ဆင်ရန်။
တုံ့ပြန်ချက်ကိုရယူပါ - မူကြမ်းအပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်ပေးနိုင်သည့်ယုံကြည်ရသောအရင်းအမြစ်များသို့သင်၏မူကြမ်း (ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိသည့်သဘောတူညီချက်ဖြင့်) ဖြန့်ဝေပါ။ ဖြန့်ဝေ Google Docs ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေ interface ကိုတိုက်ရိုက်မှတ်ချက်ပေးနိုင်လို့ပဲ။
သင့်မူကြမ်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ - တုံ့ပြန်ချက်ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏အကြမ်းအားပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။
သင့်မူကြမ်းကိုတိုးမြှင့်ပါ - သင့်မိတ္တူတစ်လျှောက်လုံးတွင်အကြံဥာဏ်များ၊ အရင်းအမြစ်များသို့မဟုတ်စာရင်းဇယားများကိုသင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသလား။
သင့်ရဲ့အဖုံးဒီဇိုင်း - ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ၏အကူအညီကိုရယူပြီးမတူညီသောဗားရှင်းအနည်းငယ်ကိုဖန်တီးပါ။ အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိသောသင်၏ကွန်ယက်ကိုမေးမြန်းပါ။
သင့်ရဲ့ထုတ်ဝေစျေးနှုန်း - သင်ကဲ့သို့သောအခြား ebook များကို၎င်းတို့မည်မျှရောင်းချသည်ကိုရှာဖွေပါ။ အခမဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုသည်သင်သွားနိုင်မည့်လမ်းဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်လျှင်ပင်၎င်းကိုရောင်းချခြင်းသည်၎င်းအားပိုမိုမှန်ကန်စေနိုင်သည်။
ထောက်ခံစာများကိုစုဆောင်းပါ - သင်၏ ebook အတွက်ထောက်ခံစာများကိုရေးသားနိုင်သောသြဇာရှိသူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူအချို့ကိုရှာပါ။ သူတို့ရဲ့သက်သေခံချက်တွေကသင့်ရဲ့ ebook ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေပါလိမ့်မယ်။
သင်၏စာရေးသူအကောင့်ကိုဖွင့်ပါ - အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာသင်၏ ebook ကို upload လုပ်၍ ရောင်းချနိုင်သောနေရာတွင်ရေးသားသူအကောင့်များနှင့်ပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာများကိုဖန်တီးရန်သော့ချက်ကျသောဆိုဒ်များကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ဗွီဒီယိုမိတ်ဆက်အသံသွင်းပါ - စာဖတ်သူများအတွက်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်သင်၏ ebook ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသောဗွီဒီယိုမိတ်ဆက်ကိုဖန်တီးပါ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုရေးဆွဲပါ - သင်၏ ebook အကြောင်းပိုမိုသိရှိလာစေရန်သင့်အားတွေ့ဆုံမေးမြန်းလိုသောသြဇာရှိသူများ၊ သတင်းစာများ၊ podcasters များနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူများကိုဖော်ထုတ်ပါ။ ကြော်ငြာတင်ခြင်းနှင့် posts ည့်သည်ပို့စ်များတင်ခြင်းကိုပင်သင်ထားချင်ပေမည်။
hashtag ကိုရွေးပါ - အွန်လိုင်းမှနှစ်တစ်နှစ်စာအုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်မျှဝေရန်တိုတောင်းသော၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော hashtag ဖန်တီးပါ။
စတင်ရက်စွဲကိုရွေးချယ်ပါ - အကယ်၍ သင်သည်စတင်ရက်စွဲကိုရွေးချယ်ပြီးထိုနေ့စွဲကိုရောင်းရန်မောင်းနှင်နိုင်ပါကသင်၏ ebook ကိုတစ်ဆင့်တက်နိုင်သည် အရောင်းရဆုံး downloads အတွက်၎င်း၏ဆူးများအတွက် status ကို။
သင့်ရဲ့ ebook ထုတ်ပေး - ebook ကိုထုတ်လွှင့ ်၍ အင်တာဗျူးများ၊ လူမှုမီဒီယာအသစ်များ၊ ကြော်ငြာများ၊
သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ဆက်ဆံပါ - သင်၏စာအုပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သူများကိုသင့်နောက်လိုက်များအားကျေးဇူးတင်ပါ။
Pro ကိုအကြံပေးချက်: ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစာရေးဆရာများသည်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဆွေးနွေးပွဲစီစဉ်သူများသည်ပွဲတက်ရောက်သူများအားပေးဆပ်ခြင်းထက် (သို့မဟုတ်အပြင်) ၎င်းတို့၏တက်ရောက်သူများအတွက်စာအုပ်မိတ္တူများဝယ်ယူလေ့ရှိသည်။ သင်၏ ebook ရောင်းချခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ ebook ဖြန့်ဝေမှု၏အဓိကအချက်တစ်ခုမှာ ebook ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်၎င်းသည်အွန်လိုင်းစာအုပ်ဆိုင်အားလုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်သန့်ရှင်းစွာတင်ပို့နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ EPUB ဒီစံဖြစ်ပါတယ်။
EPub သည် .epub ဖိုင် extension ကိုအသုံးပြုသော XHTML ပုံစံဖြစ်သည်။ EPUB အတွက်တိုသည် အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ဝေရေး။ EPUB ကို e-reader အများစုမှထောက်ပံ့ထားပြီးစမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်ကွန်ပျူတာများအတွက်သဟဇာတဖြစ်သော software ကိုရနိုင်သည်။ EPUB သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေရေးဖိုရမ် (IDPF) မှထုတ်ဝေသောစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးစာအုပ်လုပ်ငန်းလေ့လာမှုအဖွဲ့က EPUB3ကိုထုပ်ပိုးမှုပစ္စည်းများအတွက်တစ်ခုတည်းသောစံအဖြစ်အတည်ပြုသည်။
Google Docs တွင်သင်၏ Ebook ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း
အသုံးပြုသူများမကြာခဏဖွင့်လှစ် Google Docs built-in format ချနိုင်စွမ်းကိုအသုံးမပြုပါနဲ့။ သင်က ebook တစ်ခုကိုရေးနေလျှင်၊
ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖန်တီးပါ အဖုံး ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာ၌သင်တို့၏ ebook များအတွက်။
သင်၏ ebook အတွက် Title element ကိုသုံးပါ ခေါင်းစဥ် စာမျက်နှာ။
ခေါင်းစဉ် (၁) ကို သုံး၍ က အပ်နှံခြင်း ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာ၌တည်၏။
Heading 1 element ကိုသုံးပြီးသင့်ကိုရေးပါ အသိအမှတ်ပြုခြင်း ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာ၌တည်၏။
ခေါင်းစဉ် (၁) ကို သုံး၍ က ရှေ့ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်။
သင့်အတွက် Heading 1 element ကိုသုံးပါ အခန်းခေါင်းစဉ်.
ထိုသုံးပါ မာတိကာ ဒြပ်စင်။
ထိုသုံးပါ အောက်ခြေမှတ်ချက်များ ကိုးကားများအတွက်ဒြပ်စင်။ သင်ထုတ်ဝေသောကိုးကားချက်များသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်ခွင့်ပြုချက်သေချာပါစေ။
Heading 1 element ကိုသုံးပြီး an တစ်ခုရေးပါ အာဘော်အကြောင်း ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်။ သင်ရေးသားခဲ့သောအခြားခေါင်းစဉ်များ၊ သင်၏လူမှုမီဒီယာလင့်များနှင့်လူများကသင့်ကိုမည်သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကိုထည့်သွင်းပါ။
လိုအပ်ပါက page break များကိုထည့်သွင်းပါ။ သင်၏စာရွက်စာတမ်းကိုသင်မည်သို့နှစ်သက်ကြောင်းအတိအကျကြည့်ရှုသောအခါ၊ ၎င်းကိုသင်နှစ်သက်လိုသည့်အတိုင်းအတိအကျကြည့်ရှုရန်ပထမ ဦး ဆုံး PDF အဖြစ်ပုံနှိပ်ပါ။
Google Docs EPUB ပို့ကုန်
Google Docs ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ Google Drive တွင်တိုက်ရိုက်တင်ထားသောမည်သည့်စာသားဖိုင်သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းမှမဆိုသင်ရေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ အိုး - ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Google Docs ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ Ebook ကိုဘယ်လိုတင်ပို့မလဲ
သင်၏စာသားကိုရေးပါ - မည်သည့်စာသားအခြေခံစာရွက်စာတမ်းကိုမဆို Google Docs သို့ပြောင်းနိုင်သည်။ မင်းရဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးဖို့လွတ်လပ်ပါ Google Docs တိုက်ရိုက်တင်သွင်းသို့မဟုတ်ထပ်တူပြုခြင်း Microsoft Word ကို စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်အခြားဂူဂဲလ်ဒရိုက်ကိုသုံးနိုင်သည်။
EPUB အဖြစ်တင်ပို့ - Google Docs သည် EPUB ကိုမူလပို့ကုန်ဖိုင်ပုံစံအဖြစ်ကမ်းလှမ်းသည်။ ရွေးပါ File> As ကို Download လုပ်ပါထို့နောက် EPUB ထုတ်ဝေမှု (.epub) သငျသညျသှားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ!
သင်၏ EPUB ကိုစစ်ဆေးပါ - သင်၏ EPUB ကိုမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုသို့မတင်ပို့မီ၎င်းကိုစနစ်တကျ format လုပ်ရန်သေချာစေလိုသည်။ အွန်လိုင်းသုံးပါ EPUB အတည်ပြု မင်းမှာပြproblemsနာမရှိဘူးဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ရမယ်။
သင်၏ EPUB ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ထုတ်ဝေမည်နည်း
သင်၏ EPUB ဖိုင်ကိုသင်ရရှိသည်နှင့်ယခု ၀ န်ဆောင်မှုများစွာမှတစ်ဆင့် Ebook ကိုထုတ်ဝေရန်လိုအပ်သည်။ မွေးစားခြင်းအတွက်ထိပ်ဆိုင်များမှာ -
Kindle တိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေရေး Kindle Direct Publishing မှကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသော eBooks နှင့် paperbacks များကိုအခမဲ့ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် Amazon ရှိသန်းချီသောစာဖတ်သူများထံရောက်ရှိခြင်း။
အက်ပဲလ်စာအုပ်များထုတ်ဝေရေး Portal - သင်နှစ်သက်သောစာအုပ်များနှင့်သင်နှစ်သက်တော့မည့်စာအုပ်များအတွက်တစ်ခုတည်းသော ဦး တည်ရာ။
Google Play တွင်စာအုပ်များ - ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော Google Play စတိုးတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Smashwords - ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး indie ebook များဖြန့်ဖြူးသူ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုစာရေးသူ (သို့) ထုတ်ဝေသူမည်သူမဆို ebooks များကိုအဓိကလက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောစာကြည့်တိုက်များသို့ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးရန်လွယ်ကူစေပြီးလွယ်ကူစေသည်။
သင်၏စာအုပ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်၊ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာအပေါ်မျှော်လင့်ချက်များထားရန်နှင့်လူများကို ebook ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်တွန်းအားပေးရန်ဗွီဒီယိုတစ်ခုအားမှတ်တမ်းတင်ရန်ကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုခွင့်ပြုသည့်မည်သည့်ထုတ်ဝေရေး ၀ န်ဆောင်မှုတွင်မဆိုအလွန်ကြီးစွာသောစာရေးသူဖန်တီးပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါငါ့အ Affiliate link ကိုအသုံးပြုနေသည် Google အလုပ်ခွင်.
Tags: AmazonAmazon စာအုပ်များandroid ဖုန်းပန်းသီးပန်းသီးစာအုပ်များebookebooksEPubepub ပြောင်းလဲခြင်းepub converter ကိုEpub အတည်ပြုသူလူGoogle Drive ကိုGoogle Play တွင်စာအုပ်များဘယ်လိုiBooks စတိုးညှိရလစ်ရီယိုebook ထုတ်ဝေebup ထုတ်ဝေသည်xhtml
24:2014 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 24
အရမ်းကောင်းတဲ့ Post၊ ကျေးဇူးပါ။
9:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 8, 17 တွင်
google docs တွင် စာအုပ်တစ်အုပ် ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ဒီဇင်ဘာ 10, 2015 မှာ 12: 07 AM
အခုသူတို့က အတူတူပဲလို့ ငါယုံကြည်တယ် Maryam!
ဇန်နဝါရီ 22, 2021 မှာ 9: 55 AM
ဒါက ထူးချွန်တယ်။ ငါအခုလိုအပ်နေတာပဲလေ။
မတ်လ 20, 2021 မှာ 4: 49 AM
မိုက်တယ်။ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်?
မေလ 25, 2021 မှာ 7: 35 pm တွင်
တစ်မျက်နှာချင်းစီမှာ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ စာမျက်နှာ 300 ရှိတယ်။ အရက်ဆိုင်တွင် 12MB ထက်နည်းသည်ဟု အတည်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်၏ မျက်မှန်မှတ်တမ်းသည် အလွန်ကြီးနေမည်လား။ ဓာတ်ပုံတွေကို ဘယ်လိုကျုံ့ရမလဲ။ ဖြတ်ထားသော်လည်း ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလုံး ရှိနေသည်..
ဇွန် 2, 2021 မှာ 12: 50 pm တွင်
အွန်လိုင်းတွင် ရုပ်ပုံအရွယ်အစားကို ကျုံ့ရန် ကိရိယာများစွာ ရှိသည်၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် မျက်နှာပြင်တစ်ခု၏ အရည်အသွေးအထွက်အတွက် အများစုဖြစ်သည်... နိမ့်ဆုံးတွင် 72 dpi ရှိသည်။ စက်ပစ္စည်းအသစ်များသည် 300+ dpi ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့် ebook ကို print ထုတ်လိုလျှင် 300dpi သည် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ရုပ်ပုံအတိုင်းအတာသည် စာရွက်စာတမ်းအရွယ်အစားထက် မပိုကြောင်း သေချာစေပါသည် (ဒါကြောင့် ၎င်းကို မထည့်ပါနှင့်၊ မလျှော့ပါနှင့်။ ၎င်းကို သင်၏ ebook အပြင်ဘက်တွင် အရွယ်အစားပြောင်းပါ၊ ထို့နောက် ၎င်းကို ထိုနေရာတွင် ကူးထည့်ပါ)။ ထို့နောက် ပုံကို ချုံ့ပါ။ ကျွန်တော်သုံးတဲ့ image compression tool ပါ။ ရိုက်သံ.